Momba anay - Yan Tuo Composite Material Technology Co., Ltd.
Manana traikefa mihoatra ny 19+ taona amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana izahay
Yan Tuo Composite Material Technology Co., Ltd. dia miorina ao Weihai any amin'ny faran'ny atsinanana amin'ny Saikinosy Shandong sy ny Cape of Good Hope any Atsinanana. Ny orinasa dia naorina tamin'ny 14 Aogositra 2012. Ny orinasa dia miompana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana ny akora mitambatra.
Ny vokatra lehibe indrindra dia ny famaritana isan-karazany ny rojom-pitariam-pitantanana karbaona, fonosana fibre karbaona, amponga fibre karbaona, fantsona lehibe sy mpanelanelana amin'ny fantsona lehibe, fantsom-bozaka antena, fantsom-bozaka misy karbaona ary tehina fijanonana fiara Ny vokatra lehibe indrindra dia ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fantsom-pamokarana karbonina; Fanodinana sy fivarotana fantsom-pitrandrahana karbaona; Fanafarana sy fanondranana entana sy haitao ao anatin'ny sehatry ny fametrahana.
Manome mpanjifa vokatra tsara sy fanohanana ara-teknika ary serivisy aorinan'ny varotra tsara foana izahay.
Ny orinasantsika izao dia afaka mamokatra fitaovana matevina misy kaliberaly, fantsom-bozaka karbonika na fantsom-pasaka fitaratra misy savaivony 500mm sy halavany 20 metatra, ary fantsom-pitaovana hafa misy halava samy hafa.
Ny famolavolana famokarana dia azo tanterahina arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Hatramin'ny nananganana azy dia nahazo laza tsara avy amin'ny mpanjifa ny orinasa miaraka amin'ny lazany tsara sy ny kalitaony azo antoka. Ny orinasa dia mandray ny fampandrosoana matihanina ho toy ny fitarihana, vokatra avo lenta sy serivisy ho tanjona ary mahafaly ny filan'ny mpanjifa tanjona, mba hahatratrarana fampandrosoana maharitra sy tonika. Hanao fifaninanana fahaiza-manao asa tsy tapaka ihany koa izahay, ary handamina ny fandehanan'ny mpiasa any amin'ny toerana samihafa hianarana sy hitsidihana.
Fepetra ara-barotra: FOB, CFR, CIF
Fepetra fandoavana: LC, T / T, D / P, PayPal, Western Union,
Fotoana fitarihana antonony: ao anatin'ny 15 andro fiasana
Isan'ny mpiasa amin'ny varotra vahiny: 5-10
Taondrana fanondranana: Hatramin'ny2013
Manondrana isan-jato: 25% -30%
Markets lehibe: Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Eoropa Atsinanana, Azia, Afrika, Eropa Andrefana
Seranan-tsambo akaiky indrindra: Qingdao
Ny orinasanay dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana miavaka isan-karazany ny fantsona mitambatra. Manana traikefa amin'ny famokarana mihoatra ny folo taona izahay ary manao tetikasa OEM. Mazava ho azy fa manao zaran-jono koa isika amin'ny fotoana iray. Raha omenao fotoana hiaraha-miasa aminao izahay dia hahatsapa ny serivisy tsara indrindra sy ny kalitaon'ny vokatra tsara indrindra.
Noho izany antony izany, dia raisinay an-tsitrapo ny mpanjifa vaovao sy taloha avy amin'ny lafim-piainana rehetra hitsidika sy hitarika.